Amabhola e-Ball Valve, i-China Valve Balls Factory, i-Valve Sphere - Ikusasa
Ikusasa Valve Ball Co., Ltd., esungulwe ngo-2004, etholakala edume valve edolobheni Wenzhou, Isifundazwe Zhejiang. Sinokuhlangenwe nakho okuphawuleka kakhulu ekukhiqizeni nasekuthekeleni amabhola asezingeni eliphakeme nezihlalo zamavalvu ebhola.
Ukuphikelela nokwenza lukhulu kusenza inkampani ehlome kahle futhi ephethwe kahle. Sinezisebenzi ezingaphezu kuka-100 nabasebenzi abaphezulu abangama-20 bezobuchwepheshe. Ngomzamo wethu osebenza nabo, siqinisekisiwe ku-ISO9001-2015 uhlelo lwekhwalithi.
Indawo yokusebenzela, ihlanganisa indawo engama-8000㎡, inezinhlobo ezingaba ngu-100 zezinhlobonhlobo zemishini esezingeni eliphakeme yemishini, kufaka phakathi i-CNC lathes mpo, izikhungo zomshini ovundlile njll. , i-portable spectrum analyzer nokunye,
Asikwazi ukukhiqiza amabhola enziwe ngokwezifiso ngokwemidwebo yamakhasimende. Imikhiqizo esemqoka ifaka phakathi: ibhola le-trunnion, ibhola elintantayo, ibhola le-stem, uhlobo lwe-T-uhlobo / u-L-3 ibhola lendlela nensimbi kuya kwensimbi yensimbi nesihlalo esivela ku-3/8 intshi kuye kuma-intshi angu-48 (DN10 ~ DN1200) kusuka ku-150LB kuya ku-2500LB.
Ukuchazwa Kweminyaka eyi-16
Imikhiqizo Engaphezulu Kwama-30
Ngaphezu kwezigidi eziyi-15
Izinsimbi zebhola lensimbi kanye nezihlalo zamaringi esihlalo
Insimbi kuya ku-Metal Ball i ...
Insimbi ihleli ibhola le-valve nesihlalo yi-critica ...
Igama lomkhiqizo: Usayizi wendandatho yesihlalo: 1/2 "~ 32" Ingcindezi ...
Igama lomkhiqizo: Isihlalo sendandatho Usayizi: NPS3 / 4 ”~ 30 & ...
Uyemukelwa ukuvakashela idokodo No. 5A26-1
Uyemukelwa ukusivakashela etendeni elinguNombolo 5A26-1 Sizoya embukisweni womhlaba we-valve eDusseldorf eJalimane kusuka ngomhlaka 27-29th Novemba. Uyemukelwa ukuvakashela idokodo No. 5A26-1. Sizoya embukisweni womhlaba we-valve eDusseldorf eJalimane kusuka ngomhlaka 27-29th Novemba. Uyemukelwa ukusivakashela ebhuthini ...
Siyakwamukela abangane ukuthi basivakashele!
I-Future Valve Ball Co, Ltd, esungulwe ngo-2004, inkampani ineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni esivelele ekukhiqizeni AMABHOLA NEZIHLALO ezisezingeni eliphakeme kanye nezinye IZINGXENYE ze-Ball Valves. Ukuphikelela nokwenza lukhulu kwenza inkampani ehlome kahle futhi ephethwe kahle. Kuqinisekiswe ku-ISO9 ...